BAAQ NABADEED IYO CAMBAARAYNTA COLAADDA
KU: ergooyinka nabad raadinta deegaanka Darroor
KA: Jaaliyadda reer Soomaaliland ee ku nool Sweden, gaar ahaan Caasimadda Stockholm.
Jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan caasimadda dalka Sweden waxa ay aad uga tiiraanyeysanyihiin dagaalladii sokeeye ee dhawaanta ka oogmay deegaanka darroor iyo khasaarihii naf iyo maalba lahaa ee ka dhashay dagaalladaas.
Jaaliyadda Sweden waxa ay tacsi u dirayaan agoontii iyo haweenkii ay abbayaashood iyo raggoodu ku le’deen xabbaddii abtiyaashood, walaalohood iyo xigaalkood. Sidoo kale waxay jaaliyaddu u ducaynaysaa dadkii ku dhaawacmay dagaalkan sokeeye, iyadoo Alle weyne u waydiinaysa bogsiimo jidheed iyo mid qalbiga ahba.
Jaaliyadda Sweden waxay u arkaan colaadda ka aloosantay deegaanka Darroor mid aan khasaare mooyaane macno kale u lahayn dadkaas walaalaha ah aakhiro iyo adduun toona. Sidaa daraadeed waxaanu ugu baaqaynaa in ay taas nala gartaan, ilaahayna ay u toobad keenaan, wixii ismaandhaaf ahna ay ku xalliyaan wada hadal.
Jaaliyaddu waxa ay cambaaraynaysaa ergooyingii nabad raadinta ee xagaagii dhaweyd kala dhex galay labada beelood ee hadda isaga soo dhex tagay intay hawl qabyo ah soo dhoob dhoobeen.
Sidoo kale waxay jaaliyaddu canaanaysaa golaha guurtida Somaliland oo aad mooddo in aanay fahmin shaqada ay ku cunaan mushaharka oo ah tan oo kale. Maxay ka qabanayaan guurtidu magaalada Hargeysa miyaanay shaqadooda ugu mihiimsani ahayn in ay ka hor tagaan colaadaha, kuwa dhacayna ay dhakhso wax uga qabtaan.
Jaaliyaddu waxay ugu baaqaysaa ergooyinka nabadda ee ku sugan deegaanka Darroor iyo kuwa tegi doonaba:
In ay salka u dhigtaan sidii ay mushkiladdan uga keeni lahaayeen xal waara.
Waa in aanay kala tegin ilaa ay hubsadaan in nabaddu aslaaxday 100%.
Waa in ay dadka ku kala saaraan Kitaabka Alle, isaga ayaa caddaalad ahe.
Waa in ay dhexdhexaad u ahaadaan labada beelood oo aanay cidna u xaglin. Ciddii la duri karo dhexdhexaadnimadooda ama dano siyaasadeed lagu tuhmayana laga saaro ergooyinka.
Waxaanu ku boorrinaynaa jaaliyadaha reer Soomaaliland ee qurbaha in ay ergooyinka nabadda u diraan dhaqaale degdeg ah si halkaas looga hirgeliyo nabad waarta. Arintaasi way ka bilaabantay dalka Sweden, ka dib markii Jaaliyadaha Sweden ay isugu yimaaddeen kula degdeg ah.
Waxaanu ugu dambayntii u hambalyeynaynaa dhammaan dadka iyo beelaha u gurmaday deegaanka Darroor si ay u qaboojiyaan colaaddan nasiib darrada ah.
NABAD IYO WADA NOOLAANSHO
Maxamed Xirsi Guuleed: 0046(0)73-7596464
Baaqan waxaa saxeexay dadka hoos ku qoran oo ka qaybgalay shir magaalada Stockholm ka dhacay 24 feb 2007.
Cabdiraxmaan Cismaan Liibaan
Mustafa Maxamed Cige (M Dhegajuun)
Xasan A. Maxamed Halac
Maxamed Xirsi Axmed
Ismaaciil Maxamed Qaasaalli
Mubaarig Cali Maxamed
Saciid Muuse Ismaaciil
Cabdilqaadir Xasan Axmed
Axmed Yuusuf Abokor
Sheekh Ibraahin-keyse Cumar Jaamac
Maxamuud Abu Koodh
Sh Maxamuud Xasan Cali
Aadan Maxamuud Kaahiye
Cabdiwahaab Xuseen Cali
Sakariye Siciid Ismaaciil
Cabdikariim Cabdillaahi Cawaale
Axmed Xasan Dubbe
Daahir Cabdi Muuse (Daahir Dheere)
Cabdiraxmaan Jamac Ismaaciil
Faafin: Feb 26, 2007